वेब साईट र ब्लगमा अडियो कसरी राख्ने ?? - Nabaraj Budha Nabin Udasi
वेब साईट र ब्लगमा अडियो कसरी राख्ने ??
म एउटा सिम्पल ब्लगर भएर पनि होला। म संग फेसबुक, ई-मेल र फोन बाट ब्लगरको बारेमा धेरै जना साथीहरुले जिज्ञासा राख्दै आउनु भएको छ। म निकै व्यस्तताका कारण कती ई-मेल र फेसबुकमा ब्लगको बारेमा आएको म्यासेजको रिप्लाई गर्न नसकेकोमा माफी गर्न चाहान्छु। मलाई आत्मीय शुभ चिन्तक साथी जितमान राई 'सवीन' जी ले अडियो पोष्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि फोनमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। उहाँ लगायत सम्पूर्ण ब्लगर साथीहरुको लागी मैले जानेको अडियो पोष्ट बारेमा केही जानकारी दिने प्रयासमा छु।
अन्तराष्टिय स्तरमा ब्लग Wordpress.com र Blogger.com अरबौंले प्रयोगमा लिएका छन्। यस्तै नेपालमा पनि इन्टरनेटको पहुँच हुने ठाउँहरुमा ब्लगरको क्रमश संख्या बढ्दै छ। यसैले पनि होला म संग धेरै जनाले ब्लगरको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। वेब लगायत ब्लगमा अडियो पोष्ट गर्नको लागी गाह्रो छैन। सजिलै संग गर्न सकिन्छ। म आज त्यसकै लागी सानो जानकारी दिदै छु। सबै भन्दा पहिला नयाँ सिकारु ब्लगर कर्ताहरुले Google को Gmail ID बनाउनुहोस्। अनि ई-मेल बनाएर अब ब्लग Reg. गर्नुहोस.. । पहिला ब्लग रजिष्टर गर्नको लागि सबै आफ्नो बिवरण र बायोडाटा राख्नु पर्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन। सजिलै संग गर्न सकिन्छ। अब ब्लग रजिष्टर गरि सके पछी ब्लगलाई कसरी आकर्षण बनाउने ? ब्लगमा कसरी धेरै भिजिटर भित्र्याउने भन्ने बारेमा ध्यान दिएर तपाइले HTML edit गरेर पनि बनाउन सक्नु हुन्छ। तर ब्लग राम्रो डिजाइन र प्रोफिसनल बनाउन धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरत हुन्छ। यसको लागी तपाइले Google Search गरेर पनि खोजेर पढेर पनि गर्न सक्नु हुनेछ। तर मैले आज ब्लगमा कसरी अडियो राख्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयासमा छु।
अब ब्लगमा अडियो राख्नको लागी तपाई सबै भन्दा पहिला तपाइको ब्लगको युजर आईडीले ब्लग लगइन गर्नुहोस। अनि, त्यस पछि लगइन गरेर अब Dashbord मा राम्रो संग हेर्नुहोस्। त्यहाँ एक साईड तिर New Post लेखेको छ। त्यसलाई क्लिक गरेर राम्रो संग हेर्नुहोस, त्यहाँ अब Compose र HTML लेखेको लाई क्लिक गरेर अब अडियो कोडलाई कपि गरेर लिनुहोस् , त्यहाँ
यस्तो लेखेको छ। त्यसको मुनि तिर कपि पेष्ट गरि त्यसलाई अब फेरी Compose मा लिएर हेर्नुहोस। अनि अब माथी Title र Label को नाम लेखेर Publish गरेर हेर्नुहोस। अब तपाइले अडियो गीत/संगीतहरु सुन्न सक्नु हुनेछ, तपाइको ब्लग बाट....
मैले माथी ब्लगमा अडियो कसरी पोष्ट गर्ने भन्ने बिषयमा मात्रै जानकारी दिएँ। अब त्यी ब्लगमा अडियोलाई कहाँ बाट लिएर पोष्ट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिदै छु।
अब तपाई अडियो कोडको लागि www.divshare.com / www.kiwi6.com / www.archive.org यस्तै अन्य वेबसाइटमा गएर आफ्नो एकाउन्ट रजिष्टर गरेर फाइल अपलोड गर्नुहोस। अनि त्यस पछी त्यो अपलोड भैसकेको अडियो फाइललाई फाइलको वरिपरी राम्रो संग हेर्नुहोस त्यहाँ Options अन्य वेब अनुसारका हुन्छन। जस्तै उदाहरणको लागि kiwi6.com मा Share, Embed लेखेको छ। त्यो Embed मा क्लिक गरेर हेर्नुहोस, त्यहाँ Website Link, Forum Link, Music Player लेखेको देख्नु हुनेछ। अब त्यो Music Player को मुनि तिर भएको भएको कोड नै तपाइले अपलोड गर्नु भएको अडियोको कोड हो। त्यो कोडलाई कपि गरेर माथि मैल भने झैं गरि पेष्ट गरेर हेर्नुहोस।
जस्तै उदाहरणको लागि माथि मैले भने झैं यो कोडलाई कपि पेष्ट हरेर हेर्न सक्नु हुन्छ।
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://kiwi6.com/swf/audio-player.swf?audioUrl=http://k006.kiwi6.com/hotlink/gyp3oupufk/basanta_mai_ujadi_gaya_promo_final_.mp3" id=audioplayer height=27 width=400 allowscriptaccess=always></object>
<param name=movie value="http://kiwi6.com/swf/audio-player.swf?audioUrl=http://k006.kiwi6.com/hotlink/gyp3oupufk/basanta_mai_ujadi_gaya_promo_final_.mp3"></param><param name=FlashVars value=""></param>
<param name=quality value=high></param><param name=menu value=false></param><param name=allowscriptaccess value=always></param><param name=wmode value=transparent></param>
तपाइले पनि अब माथिका यी कोडहरुलाई कपी पेष्ट गरेर हेर्नुहोला।
अनि माथिको त्यी कोडको अडियो पनि सुन्नुहोस ।